“Messi waa beenlow kiciye ah” – Xiddig hore ee kooxda Real Madrid ah – Gool FM
“Messi waa beenlow kiciye ah” – Xiddig hore ee kooxda Real Madrid ah
(Spain) 24 Abril 2020. Goolhaayihii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Jerzy Dudek ayaa hadalo kulul ku tuuray xiddiga reer Argantina iyo naadiga Barcelona ee Lionel Messi, isagoo ku tilmaamay inuu yahay beenloow, kiciye ah.
Jerzy Dudek ayaa u soo ciyaaray kooxda Real Madrid mudo afar sano ah, laakiin wuxuu u fadhiyay Iker Casillas, kaliya wuxuu u ciyaaray Los Blancos 12 kulan mudadii uu joogay.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay goolhaayihii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Jerzy Dudek, wuxuuna yiri:
“Messi waa beenlow kiciye ah, sida Barcelona uu hogaaminayey Pep Guardiola, halkaasoo ay aaminsanayeen inay gaaraan kubad dhameystiran, waxayna ku ciyaaraan xanaaq”.
“Tani waxay dhaawaceysay Mourinho iyo kooxda oo dhan, Messi wuxuu aflaadeeyay Pepe iyo Sergio Ramos, isla markaana hadallada noocaas ah qofna kama filan karo inay ka soo baxayaan ninkan deggan ee quruxda badan”.
Jerzy Dudek ayaa sidoo kale ka tagin inuu ka hadlo weraryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay nin ay ku jirto isla weyni, wuxuuna yiri:
“Ronaldo waa nin kibir badan, laakiin gudihiisa waa nin dhab ah, tani waa waxa ay dadku u arkaan hal qaab ama qaab kale, maadaama uu doorbidayo in Real Madrid ay guul ku gaarto goolashiisa”.
Waa goormee taariikhda rasmiga ah oo ay Real Madrid bilaabeyso tababarka?